Youtuber Ben Phillips Anonzi Akabiridzira Safemoon Fans - Gamepoint - Bhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 17, 2022 | nhau, chiitiko
Kana vateveri nevateveri vachivimba neupofu munhu anofurira, rinogona kuve dambudziko hombe: iyo Ben Phillips nyaya ichangobva kuratidza izvozvo. Welsh YouTuber anonzi akabatanidzwa mune inonzi "pombi uye dump scheme" inosanganisira cryptocurrency Safemoon. Stephen "Coffeezilla" Findeisen, wevanhu vese, anoda kumutongesa pazvinhu zvese. The American Youtuber aita tsvakiridzo uye anoti akaona kuti Ben Phillips akatakura mari inosvika miriyoni gumi nemaviri emadhora ekuAmerica nehunhu hwekunyengerera pamusika.
Ben Phillips ane makore makumi maviri nemapfumbamwe chiitiko cheYouTube chine vateveri vanosvika mamirioni mana nemazana matanhatu pachiteshi chake. Ikoko ndiko kunyanya nezvemavhidhiyo eprank, asingawanzo kusekesa, asi kazhinji zvakare asina kunaka. Nepo munhu achigona kuwana izvi zvinoshoreka pahunhu, Ben Phillips anonzi akaita hutsotsi panyaya yeSafemoon. The American Youtuber "Coffeezilla" inotaura kuti Phillips akawana mari inosvika mamirioni gumi nemaviri emadhora ekuAmerica nekunyengera kwemusika.
Pombi uye kurasira kwakapoteredza Safemoon?
Sechikamu chekutsvakurudza kwake, Stephen "Coffeezilla" Findeisen anoti Ben Phillips akasimbisa kakawanda kuti cryptocurrency inobva paBinance Smart Chain ichabudirira maererano nechiratidzo cheSafemoon. Pachivande, zvisinei, Phillips anonzi akagamuchira zviyero zvakakura zvezviratidzo uye nguva dzose akazvitengesa mushure mekutanga "pombi" - kuwedzera kwemutengo. Nekufamba kwenguva, iyo Welsh Youtuber inonzi yakawana mari inosvika mamirioni gumi nemaviri emadhora neSafemoon. Haana kurega nekodzero dzake, Phillips akapa vateveri vake, pakati pezvimwe zvinhu, neRoll Royce, "motokari yezviroto". Icho chaigara chiri chimwe chezvinangwa zvake, Phillips akadaro pa Instagram, pakati pezvimwe zvinhu. Nekutenga kwemhando yepamusoro yemhando yemotokari, akazviona.
Zvino iwe unogona kugutsurira uye kufuratira chokwadi che "pombi uye dump scheme", asi uchipihwa pesvedzero iri kuramba ichiwedzera yeYoutubers nevamwe vanofurira, hazvisi nyore zvakare mazuva ano: kunyanya kana zvisiri zvehuwandu hwevateveri uye mari yekushambadzira, asi. zvakanangana nemari yevateveri, munhu anofanirwa kuterera kune zvinopomerwa Ben Phillips. Kunyanya muchikamu checrypto, zvinoitika zvakare uye zvakare kuti vanhu vepainternet dzimwe nguva vanogona kuve nepesvedzero inoshamisa pakuvandudzwa kwemitengo. Kana vanhu vakakurudzirwa kutenga mari kana chiratidzo, mutengo unowedzera (pombi). Vanyengeri vanoshandisa izvi uye vanotengesa pamutengo wepamusoro, saka kukosha kwemari inodonha (dump), dzimwe nguva kunyange zvakanyanya, nokuti kutevera kutengesa kwevamwe kunobatanidzwa nayo. Nenzira iyi, zvinokwanisika kuti vashoma vazvipfumise, nepo vatengesi vakatendeseka uye kazhinji vasina ruzivo dzimwe nguva vanorasikirwa nemari nokuti vanoita mukutya (kutya) kune mamiriro matsva emusika, izvo zvinowanzozivikanwa zvachose.
Maitiro akadaro ane ngozi zvikuru nekuda kwehukama hwepedyo hunowanzo pakati pevateveri nechidhori chavo. Kana vanofurira vakawedzeredza, pamwe vachivimbwa, izvi dzimwe nguva zvinogona kukonzera kukuvadzwa mu "hupenyu chaihwo", sekukanganisa kwemari mune iyi kesi.
Iyo Youtuber "Coffeezilla" yakafumura chiitiko chaBen Phillips mushure mekunge murume wekuWales amboburitsa kero yechikwama chake. Stephen Findeisen sezviri pachena akakwanisa kuronda kutengeserana kwakaitwa naPhillips. Ben Phillips angangodaro akaita noushingi nokuti akanga achirangawo vamwe nokuda kwemaitiro akafanana. Asi handizvo zvega: Ben Phillips aitoshanda senhengo yechikwata cheSafemoon dzimwe nguva, izvo zvinoita kuti zvipomerwa nezve "tenga dip" matweets evateveri vake vanosvika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu paTwitter.
Ben Phillips anonzi akatengesa zvakanyanya muna Kubvumbi, sekureva kwaCoffeezilla, panguva iyo Phillips anga achinyanya kusimba. Ben Phillips kubvira adzima mazhinji emashoko ake e Twitter. Asi internet haikanganwi.
The team kumativi Safemoon iri kutarisana nedambudziko rakakura mazuva ano: Iwe unofanirwa kuhwina zvakare kuvimba kwevateveri. Chikwata chakatenderedza CEO John Karony saka chakura nemazita makuru mashoma kubva muchiitiko chetekinoroji mumavhiki achangopfuura, uye vashandi vakarongwazve nekumwe kuchekwa kwakakosha. Chiratidzo chave kuda kugadzira nzvimbo pachayo seyakakomba yekudyara kesi. Izvi zvinofanira kubudirira, pakati pezvimwe zvinhu, ne-in-house debit card uye kuchinjana, nzvimbo yekutengesa yekristptocurrencies.
Muvhidhiyo, Coffeezilla anoratidza zvaanoti akawana nezve "pombi ad dump" kuSafemoon naBen Phillips:
Ndine urombo mukoma! * 5,00 EUR tenga
Kare Nintendo Chinja: 4K pakupedzisira inogoneka!
Inotevera ARK: Ultimate Survivor Edition yeNintendo Shandura zhizha rino
Pandemic: Digital board game inoita kunge yanyanya kuchembera
Corona board game yakagadzirwa nemhuri: ichiripo!